“Mahery ny Tenin’​Andriamanitra” (Hebreo 4:12)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
HIRA: 96, 94
INONA NO AZONAO ATAO MBA HAHATONGA NY TENIN’ANDRIAMANITRA . . .
hanan-kery eo amin’ny fiainanao?
hanohina ny fon’ny olona itorianao?
hisy heriny amin’ny mpihaino, rehefa manao anjara na lahateny ianao?
1. Nahoana isika no resy lahatra fa tena mahery ny Tenin’Andriamanitra? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
MIAIKY isika vahoakan’i Jehovah fa “velona sy mahery” ny teniny, izany hoe ny zavatra lazainy amintsika. (Heb. 4:12) Isika mihitsy no mahita an’izany eo amin’ny fiainantsika sy ny an’ny olon-kafa. Nisy tamintsika, ohatra, mpangalatra taloha, na nifoka zava-mahadomelina, na nijangajanga. Ny sasany indray nalaza na nanam-bola be, nefa mbola nahatsiaro ihany hoe nisy zavatra tsy ampy teo amin’ny fiainany. (Mpito. 2:3-11) Maro tamintsika no kivy sy tsy nahalala izay tokony hatao, nefa lasa velom-panantenana sy manana tari-dalana noho ny Baiboly. Misy tantara maro manaporofo an’izany ao amin’ny Tilikambo Fiambenana, ao amin’ilay andian-dahatsoratra hoe “Manova Olona ny Baiboly.” Azo antoka fa tena mahafinaritra antsika ny mamaky azy ireny. Na dia efa nanaiky ny fahamarinana aza isika, dia mbola miezaka hifandray tsara amin’i Jehovah foana. Manampy antsika hanao izany ny Soratra Masina.
2. Inona no manaporofo fa nisy heriny tamin’ny olona tamin’ny taonjato voalohany ny Tenin’Andriamanitra?
2 Tsy mahagaga raha olona maro no niova be rehefa nianatra ny Tenin’Andriamanitra. Izany no nitranga tamin’ny taonjato voalohany, tamin’ireo Kristianina voahosotra ho any an-danitra. (Vakio ny 1 Korintianina 6:9-11.) Niresaka momba ny karazan’olona tsy handova ny Fanjakan’Andriamanitra ny apostoly Paoly, ary avy eo niteny tamin’ireo Kristianina ireo hoe: “Efa toy izany ihany ny sasany aminareo.” Nanampy azy ireo hiova ny Soratra Masina sy ny fanahy masina. Na rehefa lasa Kristianina aza anefa ny sasany tamin’izy ireo, dia mbola nila niezaka mafy mba tsy hanao ratsy ka hifandray tsara amin’i Jehovah foana. Tsy maintsy noroahina tsy ho anisan’ny fiangonana intsony, ohatra, ny rahalahy iray voahosotra. Niova anefa izy, dia voaray indray tatỳ aoriana. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8) Tena mampahery ny mahita hoe afaka niala tamin’ny fanao ratsy isan-karazany ny mpiara-manompo amintsika noho ny herin’ny Tenin’Andriamanitra.
3 Fitaovana tena mahery nomen’Andriamanitra antsika ny Teniny, ka tena tokony hiezaka hampiasa tsara azy io isika. (2 Tim. 2:15) Hodinihintsika ato àry hoe inona no azontsika atao mba hahatonga ny Tenin’Andriamanitra hanan-kery eo amin’ny fiainantsika, sy hanohina ny fon’ny olona itoriantsika, ary hisy heriny amin’ny mpihaino rehefa manao anjara na lahateny isika. Rehefa avy mandinika an’ireo isika, dia ho afaka hampiseho hoe tena tia sy mankasitraka an’ilay Raintsika any an-danitra. Izy no mampianatra antsika mba hahitantsika soa.—Isaia 48:17.
4. a) Inona no tsy maintsy ataontsika raha tiantsika hisy heriny eo amintsika ny Tenin’Andriamanitra? b) Ahoana no hahitanao fotoana hamakiana Baiboly?
4 Tsy maintsy mamaky ny Tenin’Andriamanitra tsy tapaka isika, raha tiantsika hisy heriny eo amintsika izy io. Tokony hiezaka hanao an’izany isan’andro isika raha azo atao. (Jos. 1:8) Marina fa be atao be ny ankamaroantsika. Tsy tokony hisy na inona na inona havelantsika hisakana antsika tsy hamaky Baiboly anefa, eny fa na dia ny zavatra hafa tsy maintsy ataontsika aza. (Vakio ny Efesianina 5:15, 16.) Maro no nahita hevitra tsara mba hahafahany mamaky Baiboly isan’andro. Vao maraina na amin’ny alina, ohatra, ny sasany no mamaky azy io. Misy indray mifidy fotoana anankiray mandritra ny andro. Mitovy amin’izao nolazain’ny mpanao salamo izao no tsapan’izy ireny: “Tiako erỳ ny lalànao, ka saintsainiko foana!”—Sal. 119:97.
5, 6. a) Nahoana no tena ilaina ny misaintsaina? b) Inona no tokony hatao rehefa misaintsaina, raha tiantsika hisy vokany tsara ilay izy? d) Inona no soa noraisinao rehefa namaky sy nisaintsaina ny Tenin’Andriamanitra ianao?
5 Tena ilaina koa ny misaintsaina an’izay vakintsika ao amin’ny Baiboly. (Sal. 1:1-3) Raha tsy izany isika tsy ho afaka hampihatra ny torohevitra tena tsara hita ao. Na mamaky Baiboly vita pirinty anefa isika, na mamaky azy io ao amin’ny tablette na fitaovana hafa, dia tokony havelantsika hanohina ny fontsika ny zavatra voalaza ao.
6 Inona no tokony hatao rehefa misaintsaina, raha tiantsika hisy vokany tsara ilay izy? Tsara ny miato kely rehefa avy mamaky andininy vitsivitsy, ary mieritreritra hoe: ‘Inona no ianarako eto momba an’i Jehovah? Inona no efa ataoko izao mba hampiharana an’izay voalazan’ireo andininy ireo? Inona no azoko hatsaraina?’ Tsara koa ny mivavaka rehefa misaintsaina toy izany. Vao mainka te hampihatra an’izay novakintsika isika amin’izay, ary vao mainka hisy heriny eo amin’ny fiainantsika ilay izy.—2 Kor. 10:4, 5.
ENY AMIN’NY FANOMPOANA
7. Inona no azontsika atao raha te hampiasa tsara ny Tenin’Andriamanitra isika rehefa manompo?
7 Inona no azontsika atao raha te hampiasa tsara ny Tenin’Andriamanitra isika eny amin’ny fanompoana? Ampiasao matetika izy io rehefa mitory sy mampianatra. Hoy ny rahalahy iray: “Raha miara-mitory isan-trano ianao sy Jehovah, dia ianao foana ve no hiteny sa mba havelanao hiteny koa izy?” Toy ny hoe mamela an’i Jehovah hiresaka amin’ilay olona itoriantsika isika, raha ny Baiboly mihitsy no vakintsika aminy. Hisy heriny kokoa noho ny zavatra lazaintsika ny andinin-teny vakintsika, raha haintsika tsara ny mifidy azy. (1 Tes. 2:13) Eritrereto àry hoe: ‘Miezaka mamaky Baiboly matetika araka izay azo atao ve aho rehefa eny amin’ny fanompoana?’
8. Nahoana no tsy ampy ny mamaky andinin-teny amin’ny olona itoriana?
8 Tsy ampy anefa ny mamaky andinin-teny amin’ny olona itoriantsika. Tsy dia tena mahazo an’izay lazain’ny Baiboly mantsy ny ankamaroan’ny olona na tsy mahazo an’ilay izy mihitsy. Hoatr’izany tamin’ny taonjato voalohany, ary mbola hoatr’izany koa amin’izao. (Rom. 10:2) Tsy tokony hieritreritra àry isika hoe tonga dia ho azon’ilay olona izay andininy vakina aminy. Mila asongadina ny hevi-dehibe. Mila averina vakina mihitsy aza angamba ny teny sasany, dia hazavaina ny dikany. Ho azon’ny olona tsara izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra amin’izay, sady hanohina ny fony.—Vakio ny Lioka 24:32.
9. Inona no azo atao mba hahatonga ny olona hanaja ny Baiboly? Manomeza ohatra.
9 Mety hanampy an’ilay olona hanaja ny Baiboly koa ny zavatra lazaintsika alohan’ny hamakiana andinin-teny aminy. Azo atao, ohatra, ny milaza hoe: “Andao hojerentsika ny hevitr’Andriamanitra!” Raha tsy Kristianina indray ilay olona, dia afaka milaza isika hoe: “Mariho ange izay lazain’ity boky masina ity e!” Raha tsy mpivavaka mihitsy izy, dia azo anontaniana hoe: “Efa mba naheno an’ity ohabolana tranainy ity ve ianao?” Samy manana ny zavatra inoany sy ny fomba fiheviny ny tsirairay, ka ataontsika mifanaraka amin’izany ny zavatra lazaintsika alohan’ny hamakiana andinin-teny.—1 Kor. 9:22, 23.
10. a) Inona no nataon’ny rahalahy iray, ary inona no vokany? b) Nisy heriny tamin’ny olona nitorianao ve ny Tenin’Andriamanitra? Tantarao.
10 Maro no nahita hoe tena misy vokany tsara rehefa amakiana andinin-teny ny olona itoriana. Niverina nitsidika rangahy iray efa be taona ny rahalahy iray. Mpamaky ny gazetintsika efa an-taonany maro izy io. Tsy hoe nanatitra Ny Tilikambo Fiambenana farany fotsiny ilay rahalahy tamin’izay, fa namaky andinin-teny tao amin’ilay gazety koa. Novakiny taminy ny 2 Korintianina 1:3, 4. Voalaza ao fa “mampionona antsika amin’ny fahoriantsika rehetra” ilay “Rain’ny fangorahana sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra.” Nanohina ny fon’ilay rangahy ilay izy, ka nasainy novakina fanindroany. Nilaza koa izy fa tena nila fampaherezana izy sy ny vadiny. Lasa te hahafantatra bebe kokoa momba an’izay lazain’ny Baiboly izy taorian’izay. Tena misy heriny amin’ny olona itoriantsika àry ny Tenin’Andriamanitra.—Asa. 19:20.
REHEFA MANAO ANJARA NA LAHATENY
11. Inona no tsy maintsy ataon’ireo rahalahy manao anjara na lahateny?
11 Mahafinaritra antsika rehetra ny mamonjy fivoriana sy fivoriambe. Ny hanompo an’i Jehovah no tena andehanantsika any. Mandray soa avy amin’izay ampianarina antsika any koa anefa isika. Tombontsoa be ho an’ireo rahalahy ny hoe manao anjara na lahateny. Mila mitadidy koa anefa izy ireo hoe andraikitra lehibe izany. (Jak. 3:1) Tsy maintsy ataony miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra foana izay ampianariny. Raha manao anjara na lahateny àry ianao, dia inona no azonao atao mba hisy heriny amin’ny mpihaino izay lazainao?
12. Inona no tokony hataon’ny mpandahateny mba hiorina foana amin’ny Soratra Masina ny zavatra lazainy?
12 Tokony hataonao miorina amin’ny Soratra Masina ny anjaranao na ny lahateninao. (Jaona 7:16) Ahoana no anaovana an’izany? Mitandrema sao zavatra hafa no lasa misongadina, fa tsy ny andinin-teny resahinao. Mety ho takona tanteraka mantsy ny Baiboly raha ny fomba anaovanao ny lahateninao na ny zavatra hafa tantarainao na ny fanoharana ampiasainao no misongadina be. Tadidio koa fa ny hoe mampianatra Baiboly dia tsy midika hoe mamaky andinin-teny fotsiny. Raha be loatra aza ny andinin-teny vakinao, dia mety tsy hisy ho tadidin’ny mpihaino. Fidio tsara àry izay andinin-teny hovakinao. Vakio tsara ilay izy avy eo, hazavao, mampiasà fanoharana, ary resaho ny fomba ampiharana an’ilay andininy. (Neh. 8:8) Raha omena drafitra ianao, dia diniho tsara ilay izy sy ny andinin-teny ao. Ezaho fantarina hoe inona no ifandraisan’ny andinin-teny amin’ny fehezanteny miaraka aminy. Mifidiana andininy hanampy anao hanazava ny hevitra ao amin’ilay drafitra. (Misy soso-kevitra tsara ao amin’ny lesona 21 hatramin’ny 23 amin’ny boky Mandraisa Soa avy Amin’ny Sekolin’ny Fanompoana.) Mivavaha amin’i Jehovah avy eo mba hanampiany anao hahay hampita ny hevitra sarobidy ao amin’ny Teniny.—Vakio ny Ezra 7:10; Ohabolana 3:13, 14.
13. a) Inona no tsapan’ny anabavy iray rehefa nisy andinin-teny nanohina ny fony tany am-pivoriana? b) Efa nisy andinin-teny tena nanohina ny fonao ve tany am-pivoriana? Tantarao.
13 Nijaly be ny anabavy iray any Aostralia tamin’ny mbola kely. Nanaiky ny fahamarinana izy tatỳ aoriana. Nanokan-tena ho an’i Jehovah izy, saingy mbola tsy tena resy lahatra hoe tia azy i Jehovah. Nisy heriny be taminy anefa ny andinin-teny iray noresahina tany am-pivoriana. Nosaintsaininy ilay izy, ary nampifandraisiny tamin’ny andinin-teny hafa. * Lasa natoky izy tamin’izay fa tia azy tokoa i Jehovah. Efa nisy andinin-teny tena nanohina ny fonao koa ve tany amin’ny fivoriana na fivoriambe?—Neh. 8:12.
14. Inona no tokony hataontsika raha mankasitraka ny Tenin’Andriamanitra isika?
14 Tena mankasitraka an’i Jehovah àry isika noho izy nanome ny Baiboly. Nampanantena izy fa haharitra foana izy io, ary notanterahiny izany. (1 Pet. 1:24, 25) Tena mila mamaky Baiboly tsy tapaka isika, mampihatra an’izay vakintsika ao, ary mampiasa azy io mba hanampiana ny hafa. Raha manao an’izany isika, dia mampiseho fa tena tiantsika sady ankasitrahantsika io harena sarobidy io, ary indrindra fa i Jehovah ilay nanome azy.
^ feh. 13 Jereo ilay hoe “ Niova Ihany Aho.”
INONA NO AZONAO ATAO MBA HAHATONGA NY TENIN’​ANDRIAMANITRA
hanan-kery eo amin’​ny fiainanao?
Vakio tsy tapaka izy io
Saintsaino izay vakinao
Ampiharo izay nianaranao
hanohina ny fon’​ny olona itorianao?
Ampiasao matetika ny Soratra Masina
Asongadino ny hevi-dehibe ao amin’​ilay andininy, ary hazavao
Izay hahatonga an’​ilay olona hanaja ny Baiboly resahina alohan’​ny hamakiana andinin-teny
hisy heriny amin’⁠ny mpihaino ny anjaranao?
Ataovy miorina amin’​ny Baiboly ny lahateninao
Aza atao misongadina noho ny Baiboly ny ­fitantarana na fanoharana ampiasainao na ny fomba anaovanao lahateny
Hazavao ny andinin-teny vakinao, mampiasà fanoharana, ary resaho ny fomba ampiharana an’​ilay andininy
“NIOVA IHANY AHO”
Sarotra be tamin’​i Victoria ny nanaiky hoe tena tia azy Andriamanitra, na dia efa an-taonany maro aza izy no nahalala ny fahamarinana. Resy lahatra ihany anefa izy tatỳ aoriana. Inona no nanampy azy? Aleo izy no hitantara.
“Niova ihany .⁠.⁠. aho, 15 taona taorian’​ny batisako, rehefa nahare lahateny iray tany amin’​ny fivorian’​ny Vavolombelon’​i Jehovah. Noresahina tamin’​izay ny Jakoba 1:​23, 24. Voalaza ao fa toy ny fitaratra ny Baiboly, ary ahitana hoe hoatran’​ny ahoana no fiheveran’​i Jehovah antsika. Lasa ny saiko hoe sao dia hafa noho ilay eritreretiko àry ny fahitany ahy. Tsy nety nanaiky an’​izany anefa aho tamin’​ny voalohany. Mbola nihevitra foana aho hoe tsy ho tia ahy mihitsy izy.
“Namaky ny Isaia 1:18 anefa aho, andro vitsivitsy tatỳ aoriana. Io no tena nahatonga saina ahy. Hoy i Jehovah ao: ‘Avia hifandamina isika. Fa na mena midorehitra aza ny fahotanareo, dia hatao fotsy mangatsakatsaka.’ Toy ny niteny tamiko izy hoe: ‘Avia hiresaka isika Vicky a! Fantatro tsara ianao. Fantatro ny zavatra nataonao. Fantatro koa anefa hoe tena manenina ianao. Matokia fa tiako ianao!’
“Tsy nahita tory aho ny alin’​io. Mbola tsy nino aho hoe tia ahy i Jehovah. Nieritreritra momba ny sorom-panavotan’​i Jesosy anefa aho. Teo vao tsapako hoe nanam-­paharetana tamiko foana i Jehovah. Efa imbetsaka izy no nampiseho tamiko hoe tia ahy, saingy toy ny niteny taminy foana aho hoe: ‘Tsy tia ahy ianao satria tsy tena be fitiavana. Tsy mahavita manavotra ahy koa ny soron’​ny Zanakao, ka ento any fa tsy ilaiko.’ Lasa tsapako anefa hoe tia ahy izy, rehefa avy nisaintsaina momba ny sorom-panavotana aho.”